Dummies အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်း blogging သည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။ | Martech Zone
ကျနော်တို့ကပိုစိတ်လှုပ်ရှားမဖြစ်နိုင်! ယခုအပတ်တွင် Dummies အတွက်ပထမဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပေးပို့ခဲ့သည်။ ငါသေတ္တာကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရှေ့ဖုံးအဖုံး၌ငါတို့အမည်များကိုပုံနှိပ်ခြင်း၌တွေ့မြင်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူ၏ခံစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ဘူး။ Dummies အတွက်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်သတင်းအချက်အလက်၏စာမျက်နှာ ၄၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည်။ အကောင်းဆုံး blogging စာအုပ် စျေးကွက်အပေါ်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်။
The Wiley Dummy ဘို့ အထူးသဖြင့်ဤကဲ့သို့သောစာအုပ်နှင့်ပတ်သက်။ format ကိုတစ် ဦး ဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ္တူကူးသူအများအပြားတွင်အတွေ့အကြုံအချို့ရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သံသယရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုသင်တိုက်ရိုက်လှန်လှောနိုင်ရန်စာအုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုထိထိရောက်ရောက်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ analyticsလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ပေါင်းစပ်ပါသို့မဟုတ်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုတရား ၀ င်ကာကွယ်ပါ။ အချက်အလက်အားလုံးကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်နည်းဗျူဟာမရှိသောကုမ္ပဏီများအတွက်၊ သင့်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့တစ်ခုရှိရန်ခိုင်မာသောအကြောင်းပြချက်များ၊ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်စသည်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သီအိုရီများနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါ့ပါးသည့်စာအုပ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အခြားဖောက်သည်များအတွက်၎င်းမဟာဗျူဟာများကိုမည်ကဲ့သို့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပုံနှင့်၎င်းကိုပံ့ပိုးရန်အချက်အလက်များအတွက်အခက်ခဲဆုံးရှင်းပြချက်ဖြစ်သည်။
ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမသေဆုံးသေးသောကြောင့်အလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအချက်အချာဖြစ်လာသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းဗျူဟာ ကုမ္ပဏီများအတွက်။ ဤစာအုပ်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များနှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီအောင်မြင်ရန်ရည်မှန်းချက်များအပေါ်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ ဤစာအုပ်သည်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်များစွာသည်ပျက်ကွက်ကြောင်းရှင်းပြရန်သတိထားသည်။ အများအားဖြင့်၎င်းတို့တွင်ပြည့်စုံသောမဟာဗျူဟာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ရလဒ်များကိုမည်သို့ပြောင်းလဲစေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကြားနာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဤစာအုပ်အပြင်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးစွာသော Corporate Blogging Tips site တစ်ခုကိုလည်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ site ကိုစာရင်းပြုလုပ်ထားသည် အကောင်းဆုံးကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်များ အဓိကကော်ပိုရေးရှင်းများ၏, စာရင်း ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်း ပင်တစ် ဦး ၏ကွဲပြားခြားနားမှုမှပြော၏ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်.
တောင်အာဖရိကနှင့်Australiaစတြေးလျသို့ကူးယူသွားသောစာအုပ်များနှင့်အတူစာအုပ်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သောဘလော့ဂါများအတွက်စာအုပ်တစ်ဒါဇင်ကိုဝယ်ယူဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မွေးရပ်ဇာတိမြို့စာအုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းပြုလုပ်နေသည် Indiana Blog - လိုက်နာပါ @BlogIndiana ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ဦး ဆောင်နေတဲ့အခမဲ့မိတ္တူအနိုင်ရအချို့သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုများအတွက်!
ငါတို့လည်းကြီးစွာသောအောက်ပါအချက်များကိုရရှိပါသည် Facebook က (ပရိသတ် ၂၀၀၀ ကျော်!) နှင့် တွစ်တာ! Corporate Blogging ပညာရှင်များမှနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းသတင်းအတွက်ပရိသတ်သို့မဟုတ်နောက်လိုက်ဖြစ်ရန်သေချာပါစေ။ စာအုပ် ၀ ယ်ခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောတန်ဖိုးမဟုတ်ပါ (၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်!) …ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကိုလိုက်နာခြင်းသို့မဟုတ်စာရင်းသွင်းခြင်းသည်စာအုပ်ထက်ကျော်လွန်သောသင်အားအကြံဥာဏ်များနှင့်အချက်အလက်များကိုဆက်လက်ပေးလိမ့်မည်။
Tags: chantelle flanneryကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်Dummies များအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်douglas karrDummy
သြဂုတ် 10, 2010 မှာ 7: 35 AM
သြဂုတ် 10, 2010 မှာ 7: 58 AM
Fantastic, Doug နှင့် Chantelle ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်!
သြဂုတ် 10, 2010 မှာ 9: 56 AM
ဤစာအုပ်သည်လူအများစုအတွက်ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာသံသယမရှိပါ။ ဂုဏ်ယူပါတယ် !!!!
သြဂုတ် 11, 2010 မှာ 7: 41 AM
သြဂုတ် 11, 2010 မှာ 8: 55 AM
Kyle၊ Harrison၊ Paul နှင့် Brandon တို့၏ပံ့ပိုးမှုအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
12:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 8, 31
သြဂုတ် 14, 2010 မှာ 9: 00 AM